Ka hortagga aragtiyaha xagjirka ahi waxtar ayuu u leeyahay bulshada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ka hortagga aragtiyaha xagjirka ahi waxtar ayuu u leeyahay bulshada
Publicerat måndag 8 april 2013 kl 12.34
Degmo ka macaashtay cunsuriyaddii oo yaraatay
Warbixin dhowaan la daabacay (talaadadii) ayaa muujineysa in haddii wakhti hore la la dagaalamo kooxaha aamminsan xagjirnimada midigta iyo midabtakoorka ay degmooyinka u baaqaneyso malaayiin karoon. Ingvar Nilsson oo ah aqoonyahan cilmiga dhaqaalaha ee hay’adda SEE, kana mid ahaa dadkii wax ka qoray waxbixinta ayaa qaba in ujeeddada laga leeyahay qoraalku ay tahay in degmooyin badani ay indhaha u kala furaan faa’iidada dhaqaale ee ay leedahay in goor hore laga hortago aragtiyaha noocaas ah.
- Fekerka ka dambeeya cilmi-baarista aan samaynay waxa weeye in lagu muujiyo natiijooyinka dhaqaale ee ma aannaan eegin hababka lagu la dagaalamaayo. Waxaase u aragnaa in habkaan lagu baahin karo degmooyin kale oo badan.
Qoraalkani wuxuu ku salaysan yahay daraasad ay samaysay degmada Kungälv oo ku taal duleedka Göteborg, halkaas oo hoggaanka maamulka degmadu go’aansaday in la ciribtiro waxa aasaaska u ah ururada cunsuriga ah ama midabtakoorka aamminsan oo isku magacaaba Vitmakt. Kuwaas oo soo shaacbaxay kadib dilkii John Hron 1995. Sida qoraalka ku cad waxaa bulshada uga baxa halkii koox oo cunsuri ah kharash gaaraya boqolaal milyan oo karoon. Lagactaas oo degmada Kungälv u kaydsantay kadib markii ay ku maalgeliyeen lacag ka yar in hawlaha ka hortagga laga bilaabo fasalada 8aad iyo 9aad.
- Waxaa kaloo la go’aansaday sidii mustaqbalka loo ciribtiri lahaa waxyaalaha aasaaska u noqon kara in dhaqdhaqaaqyo midabtakoor ama cunsiriyad ku dhisan ay degmada ka abuurmaan. Muddo shan iyo sano ah ayaa si joogto ah oo nidaamsan loogu dadaalayey in la soo ururiyo oo la wacyigeliyo dhallinyaro tiradoodu u dhexeyso 20 ilaa 40 qof oo dhiganayey fasalada 8aad iyo 9aad. Taasna waxaa laga gaaray natiijo wanaagsan oo maanta degmada Kungälv kama jiraan ururo midabtakoor oo noocaas ah.